Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 40)
Noocyada hadiyadda (III): «The Knight Dark: The Legend kaca»
Bixinta cusub ee Ciyaaraha siinta. Maanta "Halyeeygii Madoobaa: Halyeeygii Ayaa Dib Loo Dhalatay".
Qalabka hadiyadaha (II): NOVA 3
Maanta, qaybtii labaad ee Ciyaaraha si loo bixiyo waxaan kuu keenaynaa NOVA 3, FPS oo waali ah oo cajiib ah.
Noocyada hadiyadeed (I): Meel bannaan
Waxaan falanqeyneynaa ciyaarta moobiilka ee qadka dhimanaysa. Mid ka mid ah kuwa culus ee wax duqeeya ee loogu talagalay Android.
Faa'iidooyinka cusub ee ku jira isticmaalka Skype ee Android kan loox ah
Skipe ayaa dib loo naqshadeeyay si looga fikiro dhammaan meelaha uu leeyahay Tablet-ka Android, isagoo ka fudud sidii hore ka hor shir ku saabsan aaladda la sheegay.
Waxaa jira Samsung Galaxy gudaha Google Nexus 10
Markaad kala daadineyso Google Nexus 10 waxaa suurtagal noqotay in la ogaado jiritaanka qaybo asal ah iyo qaybo Samsung Galaxy Tab 10.1
Dagaallada Kiniiniga - Keebaa Abuuraya Faa'iido Badan?
Dagaalkii kiniinka iyo dhacdo cusub, xaaladdan oo ah faa'iidada iibka ee la xiriirta qiimaha wax soo saarka ee mid kasta oo ka mid ah aaladaha
My Pony My Little wuxuu ku yimaadaa Android qaab ciyaar fiidiyoow ah
Ifafaalaha internet-ka, Faraskeyga Yar: Saaxiibtinimadu waa sixir, durba ciyaar ayey ku leedahay Android.
Ka faa'iideyso dallacaadaha Android iyo qiimo dhimista Jimcaha
Qaadashada 2 ama 7-inji oo ah Galaxy Tab 10 oo leh qiimo dhimis weyn ayaa ah waxa loo soo bandhigo Jimcaha Madow boggeeda rasmiga ah.
Wreck it Ralph!, Filimka Disney, wuxuu hada leeyahay kulankiisa Android
Ciyaarta rasmiga ah ee fiidiyowga loogu talagalay filimka soo socda ee Disney, Wreck-It Ralph!, Ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store.
LIFX, nalalka cusub ee korontada ku shaqeeya ee ay maamusho Android
Nalalka cusub ee LIFX waxaa laga xakamayn karaa mobilada, taasoo u oggolaanaysa raaxada iyo fududaanta in la habeeyo dhalaalka, isbarbar dhiga iyo dabka barnaamijka.
Hobbit: Boqortooyooyinka Dunida Dhexe hadda waa la heli karaa
Hobbit, marka lagu daro seddex filim, wuxuu yeelan doonaa ciyaaro badan. Maanta waxaan ka hadleynaa nooca uu u yahay Android.
Shimbiraha careysan Star Wars Trailer-ka Ugu Dambeeya
Shimbiraha Xanaaqsan Dagaallada Xiddigaha waa dhowyihiin oo waxay ina tusayaan cayaartooda iyo noocyada shimbiraha.
Isbarbardhiga kiniinka: Nexus 7 iyo iPad mini
Kiniiniga Nexus 7 iyo falanqeyn isbarbardhiga ah oo Apple ay dhawaan soo saartay iPad mini
Noocyada Android iyo qalabkooda firfircoon
Xitaa sii deynta noocyada cusub ee android, ku dhowaad 60 boqolkiiba qalabka hadda jira wali waxay ku jiraan Gingerbread.
Kiniiniyada Android ee loogu talagalay carruurta, qalabka carruurtu ku ciyaarto ama wax kale?
Tabeo iyo Kindle Fire, waa laba nooc oo kiniinno Android ah oo ay carruurtu u adeegsan karaan dhibaato la'aan iyadoo ay ugu wacan tahay iska caabbintooda weyn
Kubadda Cagta ee Real 2013
Qaybtii ugu dambaysay ee sheekada kubbadda cagta ee ay soo saartay Gameloft oo ay tahay sawirka Falcao, Real Football 2013, ayaa halkan taal.
Beastie Bay, «pokémon» ee Kairosoft
Beastie Bay, marka lagu daro si duurxul ah oo lagu xasuusto Pokémon nidaamkeeda ciyaarta, waa Kairosoft kulankiisii ​​ugu horreeyay ee bilaash ah ee Android.
Heerarka cusubi waxay yimaadaan Meedey Perry?
Aaway Perry-kii? hel codadka ku jira Castilian ee laga soo qaatay taxanaha iyo 20 heerar cusub oo cusbooneysiin ah 1.1.0
Aaway biyahaygii Hesho heerarka dhiirrigeliyay Frankenweenie ee soo socda
Aaway biyahaygii Soo hel heerar cusub oo dhiirrigeliya filimka soo socda ee Disney, Frankenweenie.
Ugu dambeyntii, Jetpack Joyride qof walba!
Mid ka mid ah kulamada waa weyn ee ka socda Halfbrick Studios, Jetpack Joyride, ayaa ugu dambeyn gaaray dhamaan isticmaalayaasha Android.
Xirmooyinka widget-ka ee daawashada Dareenka-Bilaashka ah
Xirmooyinka widget-ka ee bilaashka ah ee dhammaan aaladaha tooska ah uga soo degso halkan.
Zombie Panic ee Wonderland waxay u timaadaa Android
Ka dib markaad sii marto WiiWare iyo iOS, Zombie Panic oo ku taal Wonderland ayaa imaan doonta imaatinkeeda Android.
Birta Gear adag: Soodejinta Bulshada Ops
Waxaan aragnaa hawlgalka cusub ee Birta Gear adag: Bulshada Ops, cinwaankii ugu horreeyay ee loogu talagalay moobillada moobiilka ee uu abuuray Hideo Kojima.
Enchant U, cusub oo ka socda Glu Mobile
Glu Mobile wuxuu ka tegey Eternity Warriors 2 ilaa Enchant U, isbeddel xagjir ah. Ma rabtaa inaad aragto waxa ku saabsan? Akhri wax dheeraad ah.
Dib-u-habeyntii Amiirkii Beershiya ayaa yimid Android
Waxay ahayd inay soo marto XBLA, Ps3 iyo iOS si aad uhesho Android, laakiin waxaan horeyba ugu raaxeysan karnaa amiirkii Beershiya.
UnlockRoot, aalad lagu xidido tiro wanaagsan oo qalab ah
UnlockRoot waa qalab bilaash ah oo loogu talagalay Windows kaas oo aan ku rujin karno ama unroot karo qalab badan oo la jaan qaada.
Yaab: Hindisaha Avengers wuxuu ku bilaabmayaa Hulk
Avengers waxay uga yimaadaan Android gacanta gacanta Marvel: Avengers Initiative
Professor Layton spin-off ayaa loogu dhawaaqay Android
Professor-ka caanka ah ee Layton iyo xertiisa Luke, oo ah halyeeyo badan oo ciyaaro DS ah, ayaa imaan doona macruufka iyo Android.
Birta Gear adag: Ops Gaarka ah ayaa ku soo socda Android
Waxaan ku raaxeysan karnaa taxanaha ay abuureen Hideo Kojima ee ku saabsan Android mahadnaqa Birta Gear adag: Gaarka Ops
Dejinta cusub iyo waxa ku jira waxay u yimaadaan Dhimashada Dhimashada
Mawduucyada cusubi waxay kusii socdaan Dead Trigger. Waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa waxa cusboonaysiintiisii ​​ugu dambaysay keentay.
Chameleon Launcher Beta, oo ah qalab khaas ah oo loo yaqaan 'Tablets'
Chameleon Launcher waa launcher ay ka buuxaan astaamo iyo shaqooyin cusub oo ku siin doona qalabkeena nooca Tablet-ka ah ee leh astaamo cusub.
HTC One X ayaa loo cusbooneysiiyay Android 4.0.4
HTC waxay soo saartay cusbooneysiinta Ice Cream Sandwich 4.0.4 dhammaan isticmaaleyaasha One X, iyagoo soo bandhigaya horumarinno muhiim ah.
Ouya, mustaqbal aan la hubin
Wuxuu bilaabay inuu aad wax u garaaco, laakiin waxay umuuqataa in ifafaalaha Ouya uu siixumayo.
Launcher Big 2.0, astaysto aad Android istareexsan
Habee astaamahaaga iyo marin-u-helkaaga 'Android' oo leh 'Big Launcher 2.0', oo ah hab quruxsan oo midab leh si aqoonsi loogu siiyo mobilkaaga ama kaniinigaaga.
RTVE iyo SuperPaquito, kiniiniyada carruurta ee leh Android
Suuqa Android wuxuu sii wadaa inuu ku sii fido kiniiniyada caruurta ee loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ​​dadka ugu yar guryaha
La kulan nooca rasmiga ah ee Google Chrome, ee Jelly Bean iyo ICS
Google Chrome waxaa loo cusbooneysiiyay nooca ugu dambeeya ee beta, laga bilaabo Android 4.0 kor, korna loogu qaadayo xawaaraha
Nexus Q ayaa ka soo dejisa waxyaabahaaga Google Play shaashadaha iyo ku hadlayaasha
Google wuxuu soo bandhigayaa Nexus Q, oo ah xarun warbaahin badan oo had iyo jeer kuxiran Google Play si loogu dhageysto maqalka iyo muuqaalka dhageystayaasha iyo telefishinada
CyanogenMod 9 wuxuu bilaabay RC-kiisii ​​ugu horreeyay qalab fara badan
CyanogenMod 9 ayaa hadda bilaabay barnaamijkeedii ugu horreeyay ee Android 4.0 RC, oo ansax u ah tiro wanaagsan oo ka mid ah terminaallada Android.
Sida loo xidido loona rakibo ClockworkMod kabashada Samsung Galaxy tab p1000
Tabobar tallaabo-tallaabo ah oo leh sawirro si aad u rujinayso oo aad u rakibo ClockworkMod Recovery on Samsung Galaxy Tab, model p1000
THD N2-A, nuqul ka mid ah MacBook leh Icewich Sandwich
Nooca 'THD N-2' waa nuqul ka mid ah MacBook oo u adeega inuu ku deeqo nooc laptop midab leh oo shaqeynaya, oo ka hoos shaqeeya Android 4.0
Acer Iconia Tab A700: soo bandhigis dhow oo leh bandhig buuxa oo HD ah
Acer Iconia Tab A700 waa kiniinkii ugu horreeyay ee Android ah oo lagu soo saaro shaashadda IPS Full HD
Xeelad si loo kordhiyo nolosha batteriga ayaa u noqotay been abuur
Dhammaan "tabaha" ama tilmaamaha lagu kordhinayo nolosha batteriga ma aha kuwo run ah, inbadan oo ka mid ah waa been abuur, sida midka aan uga hadli doono maqaalkan.
Sony Tablet P: Sony wuxuu soo saaray kiniinkiisii ​​labaad ee Boqortooyada Ingiriiska
Sony Tablet P: Sony wuxuu u soo bixiyaa Boqortooyada Ingiriiska, kiniinkiisii ​​labaad, oo leh naqshad cusub oo naqshad kacaan leh, ayaa naga yaabisay kiniin kale
Lenovo IdeaPad K1: Android 3.1 iyo processor laba-core ah
Lenovo IdeaPad K1: Android 3.1 iyo processor laba-core ah.
Huawei MediaPad, kiniin cusub oo wata qalabka loo yaqaan 'Android Honeycomb' iyo processor laba-gees ah
Huawei MediaPad, kiniin cusub oo wata qalabka loo yaqaan 'Android Honeycomb' iyo processor laba-gees ah.
Arnova 7 iyo Arnova 84 Kiniiniga ayaa ku dhacay dukaamada iyo dhammaan miisaaniyadaha.
Dhawaan waxaa laga heli doonaa RRP € 99 iyo € 129, siday u kala horreeyaan, dhammaan El Corte Inglés, MediaMarkt, Saturn, Telefoonka Guryaha, Eroski, Leclerc iyo Pixmanía xarumaha Spain.
Kiiboodhka khaaska ah, kiiboodhka kiniiniyada.
Kiiboodhka kumbuyuutarrada jabsada ee kiniiniyada Android
Mouse-ka loo yaqaan 'Logitech Tablet Mouse': Mouse-ka Bluetooth-ka ee loo yaqaan 'Android 3.1 Tablets'
Mouse-ka looxa loo yaqaan 'Logitech Tablet Mouse': oo ah muuska Bluetooth-ka ah ee kiniiniyada leh Android 3.1
Andi-One, koontaroolka fog fog ee Android
Maanta waxaan rabnaa inaan kuu sheegno wax soo saar cusub oo ku qalabeysan Android: Andi-One koontaroolka fog ee caalamiga ah.
Kiniiniga cusub ee Acer, Iconia A500 Tab, ayaa horay loogu qiimeeyay Best Buy
Laga bilaabo subaxnimada Jimcaha Abriil 9, Acer Iconia A500 Tablet ayaa hadda laga heli karaa BestBuy.com boos celin, qiimo dhan 450 doolar. Iyadoo Android 3.0
Nook Color wuxuu socodsiin lahaa barnaamijyada Android
Shalay, shirkadda Barnes & Noble waxay ku dhawaaqday inay u oggolaanayso codsiyada Android inay ku shaqeeyaan e-akhristaha Nook Color.
Xanta: Sony waxay ku bilaabi kartaa Vaio netbook Google Chrome OS
Shirkadda Sony waxay horumarin doontaa laptop-ka Sony Vaio Vaio oo leh Google Chrome OS iyo processor-ka NVIDIA Tegra 2.
Toshiba waxay leedahay Tablet-ka cusub ee Android-ka ah ayaa ka wanaagsan iPad2-ka
Toshiba waxay sheeganeysaa in Tablet-keeda cusub ee Android uu ka fiicnaan doono iPad2. Iyada oo sifooyin fiican. Qiimuhu wuxuu la mid noqon doonaa iPad2. Wuxuu rabaa inuu noqdo iPad Killer.
Shirkada reer Mexico ee Kyoto waxay soosaaraysaa kiniinkeeda u gaarka ah Android
Kyoto, oo ah shirkad reer Mexico ah, ayaa soo saartay Tablet M902, waxaana laga iibsan karaa dukaamada Price Shoes oo ah 2 Mexico peso (oo ka yar 300 euro)
Airis OnePAD, kiniin ah Android lagu sameeyay Spain
In kasta oo xaqiiqda ah in ku dhowaad dhammaan kiniinnada ugu muhiimsan ee loo sii daayo iibka ay badanaa yimaadaan Spain, ...
Xtreamer PVR, Xarunta Multimedia ee leh Android.
Xtreamer PVR Multimedia center with android, oo lagu soo bandhigo Cebit iyo mustaqbalka guryaheena.
Coby Kyros: 5 kiniinno Android wanaagsan oo raqiis ah
Dhawr bilood ka hor ayaan idiinka warrannay kiniinnada cusub ee shirkadda Coby ay qorsheysay inay soo saarto sanadkan. Taas…
Motorola Xoom, Nambarka Qaabka, Qiimaha Qiimaha, iyo Soosaarka HoneyComb SDK
Kiniiniga Motorola Xoom waa badeecad tayo leh sidaa darteedna qiimaheedu wuxuu noqon doonaa mid waafaqsan tayadaas, waxaa sii dheer HoneyComb SDK wuxuu imaan doonaa dhowr toddobaad
Recon GPS Ski Goggles oo wata Android iyo Bluetooth
Qalabka muraayadaha ee GPS-ka ee ay shirkadda Trascend abuurtay, oo ay gacanta ku samaysay 'Recon Instruments', waxaa ku qalabaysan processor ARM9 ah oo la shaqeeya nidaamka hawlgalka Android
Baqbaqaaq Asteroid, oo ku habboon gaariga mustaqbalka
Baqbaqa ayaa furaya xarunteeda warbaahineed ee badan oo loogu talagalay gaariga kaas oo ku daraya nidaamka Android qaybtiisa loo yaqaan Froyo.
Motorola Xoom wuxuu noo hayey qaar sir ah, soo hel
Motorola Xoom wuxuu hayey waxoogaa sir ah, sida barometerka, oo kaniinigaan Android ka dhigaya kan ugu dhameystiran maanta.
Dell Streak kiniin 7-inji ah oo wata Android horey u soo bandhigayay
Shirkadda Dell ayaa soo bandhigtay kiniinkeeda cusub ee loo yaqaan 'android', oo loo yaqaan 'Dell Streak 7' kaas oo suuqyada ku dhufan doona goor dambe oo marka hore ku shaqeyn doona nooca Android 2.2 ka dibna loo cusbooneysiin doono Gingerbread.
Samsung waxay nagu la yaabtay CES oo leh alaabteeda Google TV
Samsung waxay nagu la yaabtay CES iyadoo la soo bandhigayo ciyaaryahan Blu-Ray ah oo leh Google TV iyo sanduuq gaar ah oo loogu talagalay barnaamijkan
Motorola waxay ku soo bandhigeysaa kiniinkeeda Xoom HoneyComb oo ay maalgalisay Google
Maanta waxay ahayd maalintii Motorola waxay soo bandhigtay kiniinkeeda Android oo la yiraahdo Xoom kaasoo la imaan doona nooca HneyComb oo ay maalgalin doonto Google.
Asus Eee Pad Slider, kiniin leh kumbuyuutar wareegaya
Asus Eee Pad Slider waa 10,1 inch oo ah cabbirka shaashadda Android oo leh kumbuyuutar jireed qwerty ah
Asus Eee Pad MeMo, diiwaankaaga dijitaalka ah wuxuu ku yimaadaa HoneyComb iyo shaashad 7-inji ah
Asus Eee Pad MeMo waa kiniinkii ugu horreeyay ee Android ka socda shirkadda Asus oo leh shaashad 7-inji ah waxayna la imaan doontaa Honeycomb
Zen Touch 2, ciyaaryahanka cusub ee Hal-abuurka ah
Creative wuxuu hayaa qalab cusub oo diyaar ah, oo loo yaqaan 'Creative Zen Touch 2', kaas oo horeyba u sii maraya tijaabooyinka FCC si loogu bilaabo sida ugu dhakhsaha badan suuqa. Iyo, haa akhristayaasha qaaliga ah, waxay la imaan doontaa Android
Waxaan tijaabinay kiniinka Android Archos 101 waana ka fikirnaa
Waxaan tijaabinay kiniiniga Archos 101 Android maalmo ah waxaanan kuu daynay aragtidayada ku saabsan
Bq Verne, kiniin leh xirfad loogu talagalay akhristayaasha
Qalabka Bq Verne waa kiniin Android ah oo sidoo kale ku jira buugag buugeed loo diyaariyey inaad ku raaxaysato kiniinka
Miyuu sinjibiilku u baahan yahay ugu yaraan qalabka looga baahan yahay qalabka? LG ayaa tiri haa
Sida laga soo xigtay LG si ay u awoodaan inay cusbooneysiiyaan Gingerbread waa lagama maarmaan in la helo shuruudaha qalabka ugu yar
Sida loo rakibo Suuqa Android qalabka cusub ee Archos Android
Laba talaabo oo fudud waxaan ku rakibi karnaa Suuqa Android kiniiniyada cusub ee 'Archos android', sida Archos 101
Froyo waxay sidoo kale timaadaa kiniiniyada 'Archos Android'
Archos wuxuu sii daayay cusbooneysiinta Android 2.2 noocyadeeda kala duwan ee kiniiniyada Android loo yaqaan jiilka 8
Waxaan tijaabinay Htc Desire HD waana kuu sheegi doonaa waxa aan u maleyno
Dhowr maalmood ayaan tijaabinay Htc Desire HD waxaanan kuu sheegeynaa wixii aan ka fikirnay taleefankan casriga ah ee casriga ah ee Froyo
Sony Ericsson Xperia X8 sidoo kale waxay bilaabaysaa cusbooneysiinteeda Android 2.1
Sony Ericsson waxay sidoo kale bilowday cusbooneysiinta Android 2.1 ee terminalkii ugu dambeeyay ee yimaada qoyska Xperia, Xperia X8
Qodobbada maskaxda lagu hayo haddii aad iibsanayso kiniin Android ah
Haddii aad dhowaan iibsanayso kiniin Android ah, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad ogaato talooyin ku saabsan qalabkan.
Sameecadaha taleefannada casriga ah ayaa loo habeeyay boosteejooyinka Android
Haddii aad badanaa isticmaasho terminal-kaaga Android si aad u dhageysato muusikada, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso dhagaha dhagaha cusub ee aan dooneyno inaan maanta kuu soo bandhigno. Kani waa nooca BackBeat ee sameecadaha dhegaha lagu dhageysto ee 'Plantronics'.
Tutorial si loo badbaadiyo qaladka markii la rakibey romka Froyo oo xidid ku leh Htc Legend
Ma rabtaa inaad ku rakibto rom oo leh rukhsad xidid ah Htc Legend ka dib markii aad u cusbooneysiisay Froyo? halkan waxaad ku haysaa xalka
Mid ka mid ah soo saarayaasha telefishanka ugu weyn adduunka, Samsung, ayaa ku biiraya Google TV
Soo saaraha telefishanka ugu weyn adduunka sida Samsung ayaa ku dhawaaqi doona u hoggaansamida Google TV bisha Janaayo
Samsung Galaxy Tab, waanu tijaabinay oo fikradayada ayaan dhiibnay
Ka dib markii aan tijaabineyno Samsung Galaxy Tab maalmo yar, waxaan kuu dhaafi doonnaa dareenkeena
Qaybaha dayactirka, si aad ugu aragto codsiyada shaashad buuxda kumbuyuutarka Android
Iyada oo loo yaqaan 'Spare Parts' waxaan ku maamuli karnaa codsiyada kiniiniyada Android shaashad buuxda
iHomePhone, taleefanka desktop-ka ee Android, iyo saldhigga multimedia sida saldhigga lacag-bixinta
TechPad, oo ah kiniin kale oo Android ka yimid Shiinaha
Kiniin cusub oo leh nidaamka hawlgalka mobilada ee Android. Markan waa TechPad, aalad lagu sameeyo Shiinaha
Muuqaalka Muuqaalka Kiniiniyada Android
Shirkadda 'Point of View' ayaa ku dhawaaqday laba kiniin oo cusub oo Android ah oo ka kala socda Mobii, mid 7-inch ah iyo midka kalena 10,1-inch, kaas oo suuqiisa laga bilaabi doono bisha November ee sannadkan.
Huawei X6 iyo Huawei X5, Androids cusub oo yimaada
Laba terminaal cusub oo Android ah ayaa suuqa soo gali doona, Huawei X6 iyo Huawei X5
Isku habee taleefankaaga Android iyo 'Synapse' ayaa kuu sameeya adiga
Synapse waxaad ku habeyn kartaa taleefankaaga Android qeexitaanka aad rabto shirkadan ayaa run ka dhigi doonta
Acer Aspire Happy, netbook leh Android 2.1 iyo Windows 7
Acer wuxuu ku dhawaaqay imaatinka 'Acer Aspire Happy', oo ah labo-boot netbook oo leh nidaamyada hawlgalka ee Android 2.1 iyo Windows 7.
Htc Desire HD oo leh Vodafone Spain laga bilaabo € 0 iyo Htc Desire Z oo kaliya shirkadaha iyo kuwa madaxbanaan
Vodafone waxay ku soo bandhigtay Spain qiimaha Htc Desire HD iyo Htc Desire Z
Si aad wax uga qorto Galaxy Tab wax ka fiican Bluetooth Stylus
Qalab loogu talagalay tabka Galaxy, oo ah Stylus leh xiriir Bluetooth, ayaa hadda laga heli karaa dukaanka internetka
Sharp wuxuu soo bandhigayaa laba nooc oo kiniiniga Android ah iyo adeegga ebook ee internetka
Sharp waxay soo bandhigtay laba nooc oo kiniin ah oo leh Android iyo adeeg loogu talagalay iibinta ebook-yada daruuraha
Biyaha iyo kuuskuusku waxba kuma aha Motorola Defy, iska hubi
Motorola Defy, oo ah terminaalka wadada ka baxsan, wuxuu si guul leh ugu gudbaa tijaabooyinka adkeysiga, biyaha hoostiisa iyo naxdin.
Waxaan sameynaa Waqtiga Wajiga?, Maya mahadsanid, iyadoo Galaxy Tab aan sameyno wicitaano fiidiyoow ah
Waxaan aragnaa tusaalooyin qaar ka mid ah sida Galaxy Tab uu awood ugu leeyahay wicitaannada fiidiyowga oo leh barnaamijyo kala duwan
Waxaan aragnaa asalka dhaqdhaqaaqa ee Motorola Droid R2-D2
Iskuday asalka dhaqaaqa ee Motorola Droid 2 R2-D2 terminal xaddidan oo xaddidan
Kiniiniga Galaxy Tab ayaa horeyba loogu qiimeeyay codka iyo qorshooyinka xogta ee Boqortooyada Midowday
Hawl wadeen ka socda Boqortooyada Midowday ayaa bilaabay qorshayaasha qiimaynta ee kiniinka Galaxy Tab
Kiniinka Galaxy Tab wuxuu la socdaa shaashadda 'Super TFT LCD', waayo?
Kiniinka Galaxy Tab wuxuu la imaan doonaa shaashadaha Super TFT LCD oo uusan la socon doonin Super Amoled, waayo?
Archos 101 si dhammeystiran, haddii aad u aqriso mar dambe kama fikiri kartid kiniin kale
Archos 101 wuxuu noqon karaa mid ka mid ah kaniiniyada ugu dhameystiran ee leh Android ee jira maanta oo si rasmi ah loo soo bandhigay.
Samsung Galaxy Tab ayaa si rasmi ah u shaacisay, dhammaan faahfaahinta
Smasung Galaxy Tab horay ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Halkan faahfaahinta oo dhan
Ciyaaryahanka Philips GoGear Connect MP4 hadda waa rasmi
Philips waxay si rasmi ah ugu magacawday laacibkeeda Mp4-ka ah barnaamijka 'Android' loona yaqaan 'Philips GoGear Connect'
Samsung Galaxy Tab wuxuu la imaan doonaa qalab, si loogu diyaariyo jeebka!
Samsung Galaxy Tab wuxuu la imaan doonaa qalab, dabool, dekedo, fiilooyin ayaa ka mid ah.
Waan ognahay qeexitaanada farsamo ee looxa Toshiba
Laga soo bilaabo isla meeshii aan ku kulannay wajiga Toshiba SmartPad waxaan hadda ka helnay qeexitaannada gudaha ee ...
Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified)